[Review] Top 5 Sữa tắm Olay nào tốt da sáng hiệu quả nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Sữa tắm Olay nào tốt da sáng hiệu quả nhất | Muasalebang in Muasalebang
Njengoba sazi sonke, ukwenza isikhumba sibe sihle ngaphandle kwezimonyo ezifana ne-sunscreen, lotion, ijeli yokugeza Futhi ingenye yemikhiqizo yokunakekelwa komzimba ebaluleke kakhulu. Impela awujwayelene kakhulu nezimonyo ze-Olay, edume kakhulu ngemikhiqizo yayo yokunakekela isikhumba. Isihloko esilandelayo sizokwethula aba-5 abaphezulu Ijeli yokugeza ye-Olay Iluphi uhlobo oluhle ekukhanyeni okuphumelelayo ukuze ukwazi ukubhekisela kulo.
1 Yiliphi izwe ijeli yeshawa ye-Olay?
2 Ingabe i-Olay shower gel ilungile?
3 Buyekeza amajeli eshawa e-Olay aphezulu angu-5 athandwayo namuhla
3.1 1. Ijeli ye-Olay Ultra Moisture Plus Shower With Shea Butter
3.2 2. I-Olay Fresh Outlast Body Wash nge-B3 – iphunga le-rose eliyengayo
3.3 3. Ijeli ye-Olay B3 Retinol Shower – Ihlanganisa i-Olay Body Cell Science ne-Retinol + B3
3.4 4. I-Olay Strawberry & Mint Shower Gel 650ml
3.5 5. I-Olay Daily Exfoliating With Sea Salts Shower Gel 650 ml
4 Ingakanani ijeli yeshawa ye-Olay? Ungathenga kuphi okwangempela?
Yiliphi izwe ijeli yeshawa ye-Olay?
Eqinisweni, i-Olay ingumkhiqizo wezimonyo osenesikhathi eside futhi odumile emakethe yaseVietnam ngemiphumela yawo yokwenza isikhumba sibe mhlophe. Njengamanje, i-Olay ingumkhiqizo ohamba phambili ngaphansi kokuphathwa kweqembu le-P&G emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba, ethenjwa izigidi zamakhasimende emhlabeni wonke iminyaka engaphezu kweyishumi.
Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ka-Olay yokunakekelwa kwesikhumba ihlukile ekugezeni ubuso, ijeli yeshawa, amafutha okugcoba umzimba, .. kodwa evelele kakhulu ijeli yeshawa ye-Olay. Ijeli yokugeza ye-Olay Kwenziwe e-USA ngobuchwepheshe besimanje.
Ikakhulukazi, ijeli yeshawa ye-Olay nayo ifakwe izici ezimhlophe zesikhumba. Akugcini lapho, ijeli yeshawa ye-Olay iphinde isize isikhumba sakho ukuthi sikhiphe kahle futhi simanzise isikhumba kahle ngenxa yezithako zemvelo ezifana nokwatapheya, uwoyela, ama-alimondi, usawoti wasolwandle, i-currant pear, …
Ingabe i-Olay shower gel ilungile?
Ukuhlola ngokunembile ukuthi ijeli yeshawa ye-Olay ilungile yini, ake sibheke ezinye zezinzuzo kanye nokubi komkhiqizo. Ngokuvamile, uhlobo ngalunye lwe-Olay shower gel luzoba nezici zalo eziyingqayizivele. Kodwa-ke, zonke zifana ngokuthi zinokubukeka okuthambile, okuguquguqukayo okunamandla amakhulu, afinyelela ku-650ml.
Ngaphandle kwalokho, lesi sixazululo sejeli yokugeza sifakwa ebhodleleni lepulasitiki elimhlophe kodwa eliqine ngokwedlulele. Ukusuka lapho, kunikeza umuzwa oqinile lapho ubamba. Ikakhulukazi, ulwazi oluhlobene nomkhiqizo oluhlanganisa umkhiqizo, igama lomkhiqizo, umthamo kanye nezithako zinyatheliswa ngendlela ecacile necacile kakhulu. Lokhu kwenza kube lula kubasebenzisi ukukhetha umkhiqizo ofanele izidingo zabo.
Enye inzuzo evelele Ijeli yokugeza ye-Olay Kunothiswe ngefomula enomsoco kakhulu. Lena inhlanganisela engu-2-in-1 enefomula ecebile kakhulu, ethambisayo. Ngaleyo ndlela, kusiza ukondla isikhumba kusuka ekujuleni kanye nokukunikeza isikhumba esinempilo, esicwebezelayo.
Akukhona lokho kuphela, izithako ezisebenzayo ze-vitamin ezimanzi zizogcina umswakama odingekayo esikhumbeni. Ngenxa yalokho, isikhumba sakho sihlala sisisha futhi sigcwele ukuphila. Ngesikhathi esifanayo, iphunga elipholile lihlala esikhumbeni usuku lonke.
Iningi labesifazane abaya ezitolo badidekile kakhulu ukuthi ukusebenzisa i-olay shower gel kuhle noma cha. Kodwa-ke, uma ngisebenzisa isikhathi eside futhi ngizwa isikhumba siba bushelelezi futhi sithambile, ngibuyile ukuze ngiqhubeke nokusebenzisa ijeli yeshawa ye-Olay.
Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi ifomula ka-Olay emnene ifanele ngisho nesikhumba esizwela kakhulu. Ikakhulukazi izindawo zesikhumba ezomile nezimangelengele njengezindololwane namadolo nazo zizothamba kakhulu.
Okuvamile, Ijeli yokugeza ye-Olay Ikhishwa ngokukhethekile emvelweni, futhi inamakha amaningi ahlukene. Ikakhulukazi, i-Olay shower gel ayibangeli umuzwa onamafutha. Ngesikhathi esifanayo, kusiza futhi ukuvuselela amangqamuzana ukuba asebenze kakhulu, futhi ngaleyo ndlela anciphise inqubo yokuguga nokoma kwesikhumba.
Buyekeza amajeli eshawa e-Olay aphezulu angu-5 athandwayo namuhla
Ijeli yokugeza ye-Olay Kunamakha amaningi ahlukene ahambisana nokuthanda komuntu ngamunye. Ngakho-ke, abantu nabo badidekile ngokukhetha umkhiqizo ofanele wesikhumba sabo. Ukusetshenziswa kanye nezithako ezibuyekezwe ngokuningiliziwe ngezansi kuzoba yisisekelo sokuthi uhlakaniphe ekukhetheni ngakunye okulungele wena.
1. Ijeli ye-Olay Ultra Moisture Plus Shower With Shea Butter
Okokuqala, lapho ubuyekeza ama-gel okugeza ama-Olay ayi-5 aphezulu namuhla, akunakwenzeka ukuziba i-Olay Plus shower gel. Lo mkhiqizo unezithako ezibalulekile zomsuka wemvelo okuhlanganisa ibhotela le-shea, umnenke kakhukhunathi, isinamoni, ipentshisi, i-vanilla, amavithamini B3, B5 & E.
Ukusetshenziswa okuvelele kwe I-Olay Ultra Moisture Plus With Shea Butter shower gel Kuyasiza ukususa ukungcola nokujuluka esikhumbeni sakho. Ngaphandle kwalokho, ihlinzeka ngemisoco kanye nomswakama ukusiza isikhumba sihlale siswakama amahora angama-24 ngokuqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, i-Olay Ultra Moisture Plus With Shea Butter shower gel inomphumela wokusekela ukwelashwa kwezinkinga zesikhumba. Njengokushisa okupholile, amabala amnyama, i-melasma ebangelwa induna, i-fungal dermatitis, i-eczema, ama-stretch marks, isikhumba esomile esibangelwa isimo sezulu, ikakhulukazi ngaphandle kokubangela ukoma noma isikhumba esinamafutha ngemva kokugeza.
Ikakhulukazi, ngobuchwepheshe obusha obuhlukile be-Lock-in-Moisture, uma usebenzisa i-Olay Ultra Moisture Plus Ngejeli yeshawa ye-Shea Butter, uzothola isikhumba sakho sibomvu ngokwemvelo kunangaphambili. Ngesikhathi esifanayo, leli jeli lokugeza lisiza futhi ukuvimbela izinkinga zokuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi kodwa futhi lithambile futhi alibi namahhadlahhadla.
Intengo yesithenjwa: 195,000 VND/700ml ibhodlela.
2. I-Olay Fresh Outlast Body Wash nge-B3 – iphunga le-rose eliyengayo
Okulandelayo, ulayini wejeli yeshawa ye-Olay edumile i-Olay Fresh Outlast Body Wash ene-B3 nephunga elimnandi. Kuyabonakala ukuthi, Ijeli yeshawa ye-Olay Fresh Outlast iletha abasebenzisi iphunga elimnandi, elihehayo lama roses. Okugqamile kulo mugqa ukuthi awugcini nje ngokususa ukungcola kodwa futhi ugcina umswakama nokushelela kwesikhumba. Ikakhulukazi angomi njengeminye imikhiqizo emakethe.
Ngaphezu kwalokho, le gel yeshawa ye-Olay nayo izokusiza ukuthi ukhiphe ukukhathala ngemva kosuku olude ngendlela emnene, ekhululekile. Konke ngenxa yokukhanya, ukuthambisa kanye nephunga elimnandi lale gel yokugeza. Uma ufuna ijeli yokugeza ehlanzekile, emnene enephunga elimnandi, lesifazane, lokhu kuyisinqumo esihle.
Intengo yesithenjwa: 159,000 VND/ 650 ml ibhodlela.
3. Ijeli ye-Olay B3 Retinol Shower – Ihlanganisa i-Olay Body Cell Science ne-Retinol + B3
Ihluke kumugqa we-Olay ojwayelekile ngenhla, i-Olay Body Cell Science iyijeli yokugeza enezithako eziqukethe amaprotheni namavithamini abalulekile ukusiza ukuthuthukisa isikhumba kanye nokukhipha umbala. Ukusuka lapho, lizwakala lithambile, libushelelezi, kodwa linganamafutha.
Ngaphezu kwalokho, i-retinol ifakwa ngokukhethekile emkhiqizweni ukusiza ukwelapha izinduna ezingemuva nesikhumba esimahhadlahhadla. Ngesikhathi esifanayo, le gel yeshawa ye-Olay iphinde isize ekuvuleni ama-pores. Okugqame kakhulu inhlanganisela ye-Retinol + B3 esebenza ukwehlisa inqubo yokuguga kwesikhumba. Ngaleyo ndlela, hlala uletha umuzwa wokusha nokuqabuleka ngemuva kokusetshenziswa ngakunye.
Ukusetshenziswa okuvelele kwe Ijeli yeshawa ye-Olay B3 + Retinol Kuyasiza ukuhlanza ngobumnene nangempumelelo isikhumba amahora angama-24. Ikakhulukazi, umkhiqizo usiza futhi ukususa amaseli afile esikhumbeni. Ngakho-ke, iphunga elikhanyayo lihlala ngokwemvelo usuku lonke.
Intengo yesithenjwa: 250,000 VND/ 650ml.
4. I-Olay Strawberry & Mint Shower Gel 650ml
Uma uzibuza ukuthi iyiphi ijeli yeshawa ye-Olay enhle, khona-ke i-Olay Strawberry & Mint 650ml iyisiphakamiso esihle. Lena ijeli yeshawa ye-Olay evela eqoqweni le-Fresh Outlast. Le jeli yokugeza isiza ukuletha ukusha kokubili ngephunga lemvelo lama-strawberries kanye nephunga elimnandi le-milky.
Izithako eziyinhloko ze-Olay Strawberry & Mint zihlanganisa ukukhishwa kwe-sitrobheli okuqukethe amavithamini amaningi A, C. Ngakho, kusiza ukuthuthukisa ikhono lokwenza mhlophe, ukukhanyisa ngisho nethoni yesikhumba. Futhi kunciphisa ukwakheka kwamabala ansundu noma umbala obala esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwe-mint ku-gel yokugeza kunezindawo eziqinile zokulwa namagciwane. Ukusuka lapho, kuyasiza ukuhlanza ngempumelelo isikhumba kanye nokuthuthukisa ikhono lokuhlanza nokukhipha ubuthi esikhumbeni. Ikakhulukazi, i-mint nayo iletha umuzwa wokuphola, ikhuthaza umoya oqabulayo nomnandi.
Amaphuzu avelele we Ijeli yokugeza ye-Olay Leli iphunga elinamandla, elimnandi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi isikhumba esimnyama esidinga ukuthuthukiswa.
Intengo yesithenjwa: 142,000 VND/ 650ml ibhodlela.
5. I-Olay Daily Exfoliating With Sea Salts Shower Gel 650 ml
Okokugcina, I-Olay Daily Exfoliating With Sea Salts shower gelOkugqanyiswe ngokunambitheka kukasawoti wasolwandle manje sekusetshenziswa amakhasimende amaningi. Eqinisweni, usawoti wasolwandle ubhekwa njenge-panacea enemiphumela eminingi enenzuzo esikhumbeni. Ikakhulukazi, ikhono exfoliate, ukusekela ukwanda kwegazi.
Ngaphezu kwalokho, usawoti wasolwandle usebenza futhi ukuqinisa ama-pores, ukuhlanza ukungcola kanye ne-sebum. Ngakho-ke, ijeli yeshawa ye-Olay Daily Exfoliating With Sea Salts inamandla okuvimbela indawo ekahle yamagciwane abangela induna.
Okugqamile okumele sikubalule wumklamo waleli bhodlela lejeli leshawa elinomumo oluhlaza okwesibhakabhaka ohlaba umxhwele. Ikakhulukazi iphunga elimnandi elihlanzekile likasawoti wasolwandle lizokunikeza umuzwa ophumuzayo njengokuhamba ogwini lolwandle. Ikakhulukazi, umkhiqizo ufanelekile kulabo abanesikhumba samafutha, isikhumba esidinga ukuhlanzwa kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, funa ukuba lula uma uhlanganisa i-exfoliation nokondliwa kwesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 138,000 VND/ihlukaniswe i-650ml.
Ingakanani ijeli yeshawa ye-Olay? Ungathenga kuphi okwangempela?
Kungabonakala ukuthi intengo yokuthengisa yebhodlela le-Olay shower gel ezindaweni zokuthengisa izohluka kuye ngezici eziningi. Kodwa-ke, sekukonke kusese ngentengo emaphakathi, ehambisana nekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, uma kuqhathaniswa nokusebenza kahle okulethayo, intengo ayibizi kakhulu futhi ayishibhile kakhulu. Intengo yejeli yeshawa ye-Olay imayelana ne-120,000 VND – 160,000 VND / 650ml ibhodlela.
Uma ufuna ukuthenga imikhiqizo yangempela ngentengo engcono kakhulu, udinga ukuzikhethela ikheli elihloniphekile nekhwalithi. Njengamanje, ungathenga ijeli yeshawa ye-Olay yangempela ngezindlela eziningi ezahlukene. Ngokucacile, ungacela othile ukuthi ayiphathe ngokuqondile esuka phesheya noma ayithenge esitolo sangempela ukuze aqinisekise ikhwalithi.
Ngaphezu kwalokho, ungaphinda uthenge kumawebhusayithi ahloniphekile asebenza ngezimpahla eziphathwayo ezithokozelwa kakhulu ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthenga into yangempela, intengo enhle kanye nethuba lokuthola izinhlinzeko eziningi ezikhangayo.
Ngenhla i-athikili efingqa abaphezulu abangu-5 Ijeli yokugeza ye-Olay Iluphi uhlobo oluhle futhi olusebenzayo. Ngalesi sihloko esingenhla, uzuze ukuqonda okuningiliziwe kwamanye ama-gel okugeza e-Olay. Sethemba ukuthi ukwabelana okungenhla kuzokusiza ukuthi ukhethe ijeli yokugeza ekufanele kakhulu kuwe.